Halista wadna garaacida aan caadiga ahayn ||Tukesomalism.com |
Inaad lahaatid wadnaha aan sida caadiga u garaaceen ayaa qatar caafimaad oo badan u keeni kara dumarka.
Soddon baaritaan oo lagu sameeyay in kadan afar milyan oo bukaan ayaa lagu helay.
Dumarka qaba trial fibrillation ( AF), ayaa qatar ugu jira inuu ku dhaco wadna xanuun iyo shalal (stroke).
Dumarka ayaa laga yaabaa inaysan wax ka tarin daawada AF, ama cudurka laga helaa goor danbe marka la barbar dhigo ragga.
Sababaha waxaa ka mid ah, dumarka qaba AF ayaan aad loo daawayn markii la barbar dhigo ragga ayuu sheegay Connor Emdin oo ka tirsan Jaamacada Oxford.
Sidoo kale, qabiirada ayaa sheegaya in dhaqaatiirta ay ogaadaan baaritaanka si looga hortago dhimashada.
Ilaa milyan qof ayaa qaba AF dalka Britain. Bukaanka qaba AF, wadanaha qaybtiisa sare- atria ayaa xiranta waqtiyo si dhaqso ah sidaas darteed muruqa wadanaha ayaan u nasan karin si fiican, taasoo hoos u dhigta shaqadiisa. June David, oo ka tirsan British Heart Foundation, ayaa sheegtay daawaynta AF inay ku yar thay dumarka iyo ragga.
“Waa muhiim in shaqaalaha caafimaadka markay daawaynayaan ama ka hortagayaan AF, inay ogaadaan saamaynta ay ku leedahay ragga iyo dumarka” ayay sheegtay.
Baaritaano kale ayaa loo baahan yahay si loo ogaado sida cudurka uu ugu kala duwan yahay ragga iyo dumarka.
Next post Muslimiintu Waxay Haystaan Diinta Islaamka ||Tukesomalism.com
Previous post Manchester United ma adduunka ayay xukumi rabaan? ||Tukesomalism.com